Ny taksim-bavy manokana ao Zeorzia · Global Voices teny Malagasy
Tolotra mampanantena dia azo antoka sy milamina kokoa
Voadika ny 19 Septambra 2021 4:18 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, Italiano, Português, Esperanto , Română , Ελληνικά, Français, English
Vehivavy eo amin'ny fipetrahana aloha. “ILO photo e11263″ avy amin'ny ILO PHOTOS NEWS, nampiasana lisansa CC BY-NC-ND 2.0
Mampanantena ny dia azo antoka ho an'ny mpanjifany, amin'ny alàlan'ny fanomezana mpamily vehivavy ny tolotra taksy vaovao natokana ho an'ny vehivavy irery ihany any Zeorzia antsoina hoe TaxiWoman. Ity vondrona ity no farany miatrika ny olana manerantany amin'ny fahabangana ara-pitaterana izay ao anatin'ny ezaka hanomezana safidy azo antoka sy malalaka ho an'ny vehivavy.
Araka ny pejy Facebook TaxiWoman, hiasa amin'ny alàlan'ny fampiasa izay mbola eo ampamolavolana ny tolotra araka ny nolazain'ny mpamorona ny tetikasa. “Araka izay hampahatsiahivinao, orinasa vao misandratra izahay, mbola mila fotoana ny fampiasa, saingy eo am-pirosoana izany,” hoy ny fanazavan'ny ranty iray tao amin'ny Facebook. Eo am-piandrasana, mpandraharaha iray no hisahana ny fanomezana ny tolotra.
Ranty iray hafa ao amin'ny pejy TaxiWoman no manazava fa ny tolotra dia “natao ho an'ny vehivavy sy ny olona latsaky ny 16 taona.”
Io no nofinofisiko kely. Tena misalasala aho ny hanafatra taksy amin'ny alina. Tsy ao an-tsaina ny misakana taksy eny an-dalambe. Hanamora ny fiainan'ny vehivavy maro izany. Manantena aho fa hahomby izany.
Araka ny filazan'ny OC Media, nisy tolotra nitovy tamin'izany natomboka tany Zeorzia tamin'ny 2012 tamin'ny alàlan'ny marika antsoina hoe “Pink Taxi.” Saingy najanon'ity vondrona ity ny serivisiny taorian'ny nanombohan'ny orinasa nanakarama mpamily lehilahy maro kokoa ary nanolotra ny asany ho an'ny mpanjifa lehilahy ihany koa.
Efa malaza ihany koa hatraiza hatraiza manerana an'izao tontolo izao ny tolotra taksy izay natokana irery ihany ho an'ny vehivavy mpanjifa. Nisy tolotra mitovy amin'izany natomboka tamin'ny taona 2015 tany Egypta. Tamin'ny antsafa nifanaovana tamin'ny The Guardian, nilaza tamin'ny seha-baovao tamin'izany fotoana izany ny mpanorina azy Reem Fawzi fa natokana ho an'ny vehivavy irery ny tolotra, ary vehivavy no mpamily. Noho ny antony ara-piarovana, takiana ny mpanjifa handefa ny laharany (ID). Ny fivezivezena rehetra dia voarakitra amin'ny alàlan'ny fakantsary anatiny ary afaka manindry ny «bokotra antsoina hoe “mamono” ireo mpanjifa ny tolotra hampijanona lavitra ny fiara raha ilaina», hoy ny tatitra nataon'ny The Guardian.
Any Torkia, nisy tolotra mitovy amin'izany ihany koa tao amin'ny faritanin'i Sivas tamin'ny taona 2016. Pakistan, India, ary ny tanandehiben'i Meksika no anisan'ny toerana hafa izay voalaza fa nisy tolotra mitovy amin'izany natomboka tato anatin'ny taona vitsivitsy. Ao an-tanandehiben'i New York, natomboka tamin'ny 2014 ny tolotra taksy antsoina hoe “SheTaxis-SheRides”.
Araka ny tatitra iray navoakan'ny International Finance Corporation (IFC) tamin'ny taon-dasa hoe “Amin'ny maha mpandraharahan'ny fitaterana dia tsy heverina firy amin'ny maha mpanjifa ny fitaterana azy ireo ny vehivavy ary miatrika fanamby maharitra sy manerantany amin'ny resaka fahazoana misitraka malalaka, fahazoana miditra ary ny fiarovana izy ireo. Misy fiantraikany lehibe izany eo amin'ny lafiny fahalalahan'ny vehivavy mivezivezy sy ny fahafahana mandeha miasa sy mankany an-tsena: nanoratra ny Fikambanana Iraisampirenena momba ny Asa (OIT 2017) fa mampihena ny fandraisan'ny vehivavy anjara mihoatra ny 15 isan-jato ny fahabangana eo amin'ny fitaterana. Nanao fanadihadiana nanerana ny firenena miisa enina ny IFC momba ny tanjon'ity tatitra ity, ary nahita fa nilaza ny 20 isan-jaton'ny vehivavy fa, “ny tsy fisian'ny mpamily vehivavy no mametra ny isan'ny dia hataon'izy ireo ary nilaza ny 44 isan-jato fa mety hampiasa kokoa ny tolotra izy ireo raha afaka misafidy mpamily vehivavy.”
Araka ny tatitra nataon'ny IFC, ny fanavahana ny fitaterana ho an'ny lahy sy ny vavy (GS) amin'ny fiara mpitatitra no tolotra ary misy maodely isankarazany amin'izany satria “tsy misy maodely mamaritra ny tolotra GST mipoitra.” Na izany aza, ny tolotra “natolotra manokana ho an'ny vehivavy”, mitovy amin'ny TaxiWoman no voalohany amin'ireo maodely ireo.
Maodely miasa ho an'ny tolotra fitaterana misaraka ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy, Tatitry ny IFC , Jona 2020.
Na dia tsy any Zeorzia irery ihany aza no ahitana ny fangatahana ny tolotra taksy natokana ho an'ny vehivavy, dia mampanontany tena izany ny amin'ny fampiasana vehivavy mpamily izay tsy dia misy firy amin'ny sehatry ny fitaterana raha ny fikarohana nataon'ny IFC.
Raha ny filazan'ny Birao misahana ny Antontanisa Nasionaly ao Zeorzia , 14 isan-jato (30.648) amin'ireo vehivavy any Zeorzia ihany no manana fahazoan-dàlana hamily ary 16 isan-jato (190,674) no manana fiara.
Na dia vao manomboka aza ny TaxiWoman, dia mety sady manome dia azo antoka ho an'ireo mpanjifany izany no mampitombo ny fahafaha-miasa ho an'ireo mpamily vehivavy any Zeorzia.